« ကြက်သားကင် (Turmeric Chicken Roast)
June 14, 2010 by chowutyee ရှမ်းခေါက်ဆွဲ (၅ယောက်စာ)
Posted in -မြန်မာ ချက်ပြုတ်နည်းများ | 13 Comments	13 Responses
on June 14, 2010 at 3:06 pm | Reply hmone
seem very nice and not that difficult to do…will try when i move to new house😉
on June 15, 2010 at 6:36 am | Reply chowutyee
ok plz try it!! Taste is so yummy!!🙂
on July 22, 2010 at 4:20 pm | Reply စိမ့်လေး
on July 24, 2010 at 5:35 am | Reply chowutyee
on September 19, 2010 at 11:54 am | Reply Lace
Lace ရေ ယိုးဒယား သင်္ဘောသီးထောင်း လုပ်နည်း တင်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်.. ကျေးဇူးပါ..🙂
on January 5, 2011 at 9:12 am | Reply ngataylay
အမရေ ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုလို့ လေ ကျိုင်းတုံဘက်က ရှမ်းခေါက်ဆွဲနဲ့ သံလွင်ဒီဘက်ခြမ်းပေါ့နော် တောင်ကြီးတို့ လားရှိုးတို့ ဘက်ကရှမ်းခေါက်ဆွဲနဲ့ ကမတူဘူးနော်…. ဘာဖြစ်လို့ လဲတော့မသိဘူး ဒီဘက်ကရှမ်းခေါက်ဆွဲက အစီးတို့ အဖွယ်တို့ … သံလွင်အရှေ့ ခြမ်းကျတော့ အရည် နဲ့အသားလုံးနဲ့ ဘယ်လိုခေါ်လဲတော့မသိဘူး…… အဲဒီသံလွင် အရှေ့ ခြမ်းက ရှမ်းခေါက်ဆွဲလိုမျိုးလေး တင်ပေးပါလား…. မစားရတာလဲကြာပြီဆိုတော့လေ လုက်လဲလုပ်တတ်ဘူး….😀
on June 22, 2011 at 9:22 pm | Reply viOlet
on October 8, 2011 at 4:50 pm | Reply boattahuuthar
on October 10, 2011 at 6:08 am | Reply chowutyee
on May 21, 2012 at 12:55 am | Reply Hung Awm Thang
on May 22, 2012 at 3:26 pm | Reply ရင်မွှေး
on May 22, 2012 at 3:27 pm | Reply ရင်မွှေး